Inqubomgomo Yobumfihlo - Umthetho Uqinisekisa i-Dubai
Isaziso Sobumfihlo ("Isaziso") sichaza indlela u-Amal Khamis Advocates Legal Consultant, inkampani etholakala e-United Arab Emirates (ehlanganyelwe kulo mbhalo ngokuthi "Amal Khamis", "Amal Khamis" "thina" "yethu" noma " us ") ivikela ubumfihlo belwazi lakho lomuntu siqu.
U-Amal Khamis unikeza isiteji esihlinzeka ngemisebenzi yezomthetho kumphakathi jikelele.
Ngenxa yokubaluleka kobumfihlo bakho futhi ukwenza kube lula ngawe ukuthola nokubukeza, senze le Nqubomgomo Yobumfihlo ibe idokhumenti ehlukile kusayithi. Noma kunjalo, khumbula ukuthi yingxenye yesivumelwane sethu nawe futhi uma singenza izinguquko kulezi zitatimende nemigomo, nokuthi zibophezela kanjani kuwe. Sigcina ilungelo lokuguqula le nqubomgomo. Noma yikuphi ushintsho kumgomo kuzothunyelwa kuleli khasi. Abasebenzisi bakhuthazwa ukuthi bahlole ikhasi njalo njengoba bezoboshwa izinguquko uma bezithunyelwe kusayithi.
Sicela ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo ngaphambi kokusebenzisa Iwebhusayithi ye-Amal Khamis noma uthumele ulwazi lomuntu siqu kithi.
YINI LOKWENZA NGOMUNTU OYAWUBA?
Ukwaziswa komuntu siqu ngokuvamile kusho ulwazi olumayelana nomuntu ophilayo ongaziwa ngalolo lwazi, noma kulowo lwazi nolunye ulwazi kumuntu, kufaka phakathi noma yimiphi imibono yemibono, kungakhathaliseki ukuthi yiqiniso noma cha, nokuthi iqoshwe ifomu elibonakalayo noma cha , mayelana nomuntu okhonjisiwe noma owaziwayo, nanoma iyiphi inkomba yenhloso maqondana nomuntu ngamunye.
Ngokuvamile, uhlobo lomniningwane womuntu siqu luhlobene nalabo esikunikezelayo ("isevisi"). Ngakho-ke thina sivame ukucubungula izinhlobo ezilandelayo zolwazi lomuntu siqu ngawe kufaka phakathi imininingwane yakho yokuxhumana (njengegama, ikheli lokuhlala / leposi, inombolo yocingo, ikheli le-imeyli);
Siphinde siqoqe ulwazi ngokungaqondile uma ufinyelela iwebhusayithi yethu kuhlanganise nokwaziswa ngokuphathelene nekheli lakho le-IP, indawo, ubunikazi kanye nolunye ulwazi oludingekayo ukuze kuvikeleke kanye nezinhloso zokusebenza.
Siqoqa ulwazi kuwe uma ubhalisa kusayithi lethu noma ufaka ulwazi kusayithi lethu. Siphinde siqaphe ngokuqhubekayo umsebenzi wakho wokuphequlula futhi siqoqa njalo ulwazi ukuze usisize sithuthukise isipiliyoni sakho somsebenzisi.
Ukusetshenziswa kwethu kwedatha yakho yomuntu siqu kuzohlale kunomthetho, kungenxa yokuthi kuyadingeka ukuthi Sisebenze isivumelwano sakho nawe, ngoba uvumelekile Ukusebenzisa kwethu idatha yakho yomuntu siqu (isib. Ngokubhalisela ama-imeyili), noma ngenxa yokuthi Ezithakazelweni zethu ezisemthethweni. Ngokuqondile, Singasebenzisa idatha yakho ngezinhloso ezilandelayo:
Ukuhlinzeka nokuphatha ukufinyelela kwakho kwiSayithi lethu;
Ukuzenzela nokwenza okuhlangenwe nakho kwakho kwiSayithi Lethu;
Ukuzenzela nokwenza imikhiqizo yethu nezinsizakalo zakho;
Ukuphendula ema-imeyili avela kuwe;
Ukunikezela nge-imeyili oyikhethele ukungena (ungase uzikhiphe ohlwini noma ukhethe noma nini ngokuchofoza isixhumanisi esingabhalisi phansi phansi kunoma iyiphi i-imeyili;
Ukuhlaziya ukusetshenziswa kwakho kweSayithi lethu nokuqoqa impendulo ukuze sikwazi ukuthuthukisa njalo iSayithi lethu kanye nesipiliyoni sakho somsebenzisi.
Ngemvume yakho kanye / noma lapho umthetho uvunyelwe khona, singasebenzisa futhi idatha yakho ngezinhloso zokuthengisa okungase kuhlanganise ukuxhumana nawe nge-imeyili ngolwazi, izindaba kanye nokunikezwa kwemikhiqizo namasevisi wethu. Nokho, ngeke sikuthumelele noma iyiphi imakethe engavunyelwe noma ugaxekile futhi uzothatha zonke izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ukuthi sivikela ngokugcwele amalungelo akho wobumfihlo.
Sinezizathu ezisemthethweni zokucubungula idatha ekhona ngenxa yezizathu ezithakazelisayo njengoba abasebenzisi abahlanganyele nathi ngaphambili futhi sithumela ukuxhumana okuqondene nomkhakha, kubantu abasebenza / imisebenzi efanele, ngemikhiqizo kanye nezinsizakalo ezifanele.
SIKUKHUSELA KANJANI ULWAZI?
Sisebenzisa izindlela eziningana zokuphepha, ukungena, noma ukufinyelela ulwazi lwabo ukugcina ukuphepha kolwazi lwakho lomuntu siqu.
Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi wonke amawebhusayithi axhomekeke ku-intanethi, okungaqondakali kakhulu, futhi akekho umuntu oyedwa noma inhlangano engaqinisekisa ukuphepha okuphelele noma ukulawula imisebenzi evelele kwi-inthanethi. Nakuba sisebenzisa izinyathelo ezihlukahlukene zokuphepha, kodwa ngenxa yokungakwazi kwethu ukulawula phezu kwe-Intanethi asikwenzi nanoma yisiphi isikweletu sokulahlekelwa kolwazi ngenxa yokuthi asikho iphutha ekugcineni.
INGABE SISEBENZISA 'AMAKHOSI'?
Yebo. Ama-cookies amafayela amancane ukuthi isayithi noma umnikezeli wezinsizakalo uyadlulisela ku-hard drive yedokhumenti yakho ngokusebenzisa isiphequluli sakho seWebhu (uma uvumela) esenza izinhlelo zesayithi noma zezinsizakalo zithole isiphequluli sakho futhi zithinte futhi zikhumbule ulwazi oluthile. Ngokwesibonelo, sisebenzisa amakhukhi ukusisiza sikhumbule futhi sisebenze izinto enqoleni yakho yokuthenga. Zisetshenziselwa ukusisiza ukuthi siqonde izintandokazi zakho ngokusekelwe kumsebenzi wangasese wangaphambilini noma wamanje, okwenza sikwazi ukukunikeza amasevisi ethuthukisiwe. Siphinde sisebenzise amakhukhi ukusisiza ukuba sihlanganise idatha ehlanganisiwe mayelana nesayithi le-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze sikwazi ukunikeza ama-site namathebhu kangcono esikhathini esizayo.
Qonda futhi ulondoloze izintandokazi zomsebenzisi zokuvakashelwa esikhathini esizayo.
Gcina ithrekhi yezikhangisi.
Hlanganisa idatha ehlanganisiwe mayelana nesayithi ye-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze unikeze ama-site angcono namathuluzi wesayithi esikhathini esizayo. Singasebenzisa nezinsizakalo ezithembekile zomuntu ezithatha lolu lwazi esikhundleni sethu.
Ungakhetha ukuthi ikhompiyutha yakho ikuxwayise njalo uma ikhukhi ithunyelwa, noma ungakhetha ukuvala wonke amakhukhi. Ukwenza lokhu ngokusebenzisa isiphequluli sakho (njenge-Internet Explorer) izilungiselelo. Isiphequluli ngasinye asifani kakhulu, ngakho-ke bheka imenyu yosizo lwesiphequluli sakho ukuze ufunde indlela efanele yokuguqula amakhukhi wakho.
Uma ukhubaza amakhukhi, ezinye izici zizokhutshazwa. Kungathinta ukusebenza kwesayithi okungenza ukuthi isipiliyoni sakho sesayithi singasebenzi kahle futhi ezinye zezinsizakalo zethu ngeke zisebenze kahle.
Noma kunjalo, ungase ukwazi ukubeka ama-oda.
INGXENYE YESITHATHU IYAQALA
Asizithengisi, ukuhweba, noma ukudlulisela emaphephandeni angaphandle imininingwane yakho ebonakalayo ngaphandle kokuthi sikunikeze isaziso esandulele. Lokhu akubandakanyi abalingani bezakhamuzi ze-website kanye namanye amaqembu asisiza ekusebenzeni iwebhusayithi yethu, ekwenzeni ibhizinisi lethu, noma ekukhonzeni, uma nje lawo maqembu avumelana ukugcina lolu lwazi oluyimfihlo. Singase futhi sikhulule ulwazi lwakho uma sikholelwa ukukhululwa kufanelekile ukuhambisana nomthetho, ukuphoqelela izinqubomgomo zethu zesayithi, noma ukuvikela amalungelo ethu noma amanye, impahla noma ukuphepha. Singakhipha i-credit card yakho kanye nolwazi oluhlobene ne-akhawunti ngqo kumaqembu asisiza ukuthi sisebenze ukucubungula izinkokhelo zokuthenga ozenzayo kuwebhusayithi yethu.
IZINGQUBO ZABANTU ABAKHULU
Uma ikheli le-e-mail osinikeza lona ikheli le-e-mail elingenantambo, uyavuma ukuthola imilayezo evela kithi kuleli kheli, ngokuya ngokubhalisile kwakho. Ungashintsha izintandokazi zakho ze-imeyili nganoma yisiphi isikhathi, kodwa amazinga akho asebenzayo angenazintambo angasebenza uma nje uthola imilayezo ekheli le-e-mail elingenantambo. Uma usinika ikheli le-e-mail elingenantambo, umelela ukuthi ungumnikazi noma umsebenzisi ogunyaziwe wedivaysi lapho imilayezo izotholwa khona futhi ugunyaziwe ukuvuma amacala afanelekayo.
IZINGANE NGEMINYAKA YE-13
I-Site ayihloselwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-13. Asiqoqa noma silondoloze noma yiluphi ulwazi olubonakalayo oluvela kubantwana abangaphansi kweminyaka engu-13. Uma ungaphansi kwe-13, sicela ungasebenzisi le webhusayithi, ukuthenga nge-Website noma uthumele noma yiluphi ulwazi mayelana nawe, kuhlanganise negama lakho, ikheli, inombolo yocingo noma ikheli le-imeyli. Uma ukholelwa ukuthi singase sibe nolwazi kusuka kwengane engaphansi kweminyaka engu-13, sicela uxhumane nathi ku-: [case@lawyersuae.com].
Singashintsha le Nqubomgomo ngezikhathi ezithile. Kwezinye izimo, singakuzisa ngezinye izindlela, njengokuthumela i-imeyili. Kwezinye izimo, singathola imvume yakho kuzinguquko.
Uma unemibuzo noma imibono mayelana nemikhuba yethu yobumfihlo, kufanele uqale uxhumane no-Amal Khamis ngokuthumela nge-imeyli case@lawyersuae.com Noma shayela + 971 50 6531334.